चीज उद्योगबाट करोडपति
२२ पुष २०७३
इलाम । रसुवाका तुलु तामाङले २० वर्षअघि इलाम आउने सोचेका पनि थिएनन् । यहाँ आएर करोडपति हुँला भन्ने त कल्पना पनि थिएन । तर, उनको जीवनमा नसोचेकै भएको छ अहिले । उसबेला उनलाई उतै विदेशी घुमाएर जीवन चलाउने सपना थियो । एक दिन एक सज्जनको भरिया बनेर पहाड चढ्दै गर्दा आएको नयाँ प्रस्तावले तुलुलाई इलाम ल्यायो ।इलाममै पोखेको पसिनाले उनलाई करोडपति बनायो । मानसम्मान पनि थमायो । यती डेरीका सञ्चालकले कतै पहाड चढ्दै गर्दा तामाङलाई चिज कारखानामा कामदारका रूपमा काम गर्न प्रस्ताव । जीवन चलाउन गाह्रो भएका उनलाई त्यो प्रस्ताव अवसर जस्तै लाग्यो । उनकैपछि लागेर इलामको पशुपतिनगरमा रहेको यती डेरीमा २०५२ देखि काम सुरु गरे ।
खासै लेखपढ नगरेका उनलाई रसुवाको यार्साले मेहनत गर्न सिकाएको रहेछ । जहाँ उनी जन्मे र आफ्नै माटोमा पौठेजोरी खेल्न सिके । यार्सा छोडेको दुई दसक बित्दा पनि त्यहाँको मायाले छोडेको छैन उनलाई । पशुपतिनगर आएपछि १४ वर्ष यतीडरीमै बिताए । त्यही सुखदुःख भोगे । मेहनत गरे । निक्कै कुरा सिक्ने मौका पनि पाए । यती डेरी बन्द भयो । यती बेलासम्ममा उनले घरजम गरी सकेका थिए । यती डेरीले चिज उत्पादन गर्ने गरेको थियो । काम गर्ने उद्योग बन्द भएपछि तुलुले लक्की डेरीको सुरुवात गरे । कुरो २०६६ सालको हो । सुरुमा चिज कारखाना चलाउने भन्दै दूध बेच्न प्रस्ताव गर्दा स्थानीय किसानले उनलाई पत्याएनन्।
सुन्दरपानी दुग्ध सहकारीलाई फकाएर ४० लिटर दूध खरिद गरेर उनले तीन किलो चिज बनाए । त्यो दिन नै तामाङको जीवनको टर्निङ पइन्ट भयो । सानो भाँडामा दूध तताएर चिज बनाएको सम्झना अहिले पनि आलै छ । अहिले अवस्था परिर्वतन भएको छ ।
“क्याटलानलाई स्वायत्तता विहीन तुल्याइने”
दीपावलीको साँझ यस्तो देखियो उपत्यकाको झिलिमिलि
यसरी हुँदैछ न्युरोडमा फूलमाला किनबेच
सुनचाँदी व्यापारीलाई ‘दशैं’, एक सातामै हुन्छ दुई अर्बको कारोबार
घरघरमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिँदै
पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री शरीफविरुद्ध अदालतमा आरोप तय
विना बिभागियमा थन्क्याइएका शाहीले ८३ दिन ऊर्जामन्त्री हुँदा के–के गरे ?
जसले स्तन क्यान्सरलाई जिते, कस्ता महिलामा हुन्छ सम्भावना उच्च ?
► Play 1443
► Play 712